Sida loo bixiyo hadal | Metro
Haddii aad u baahan tahay turjumaan luqadeed si hadal waji-ka-waji uga soo jeediso, codsigaaga u soo gudbi xafiiska Golaha Deegaanka ee 503-797-1916 ugu yaraan shan maalmood ee maalmaha shaqada kulanka ka hor.
Haddii aad u baahan tahay adeegyo ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo sababo la xiriirta naafonimo ama si waji-ka-waji aad meesha uga hadasho, codsigaaga u soo gudbi xafiiska Metro Council lambarka 503-797-1916 ugu yaraan 24 saac kulanka ka hor.
Wax badan ka bara
Waxaad kula wadaagi kartaa faallooyinkaaga, kala xulashadaada iyo talooyinkaada Metro Council qaabab dhowr ah. Waxaa dhici karta in taladaadu ay saameyn ku yeelato sharciga go'aamada. Waxay ka mid noqonayaan diiwaanka joogtada ah ee go'aan qaadashada deegaankeena.
Waxaad hadalka aad furi kartaa inta lagu jiro:
Bilowga kulan kasta oo gole, madaxa Golaha Deegaanka wuxuu dadka ku casuumaa inay ka marag furaan mowduucyada ajandaha laga yaabo ama aan ku jirin. Qeybtan ka mid ah kulanka golaha waxaa loogu yeeraa "wada-hadalka dadweynaha."
Dhageysiga dadweynaha ee xukummada
Sharcigu wuxuu farayaa in dhammaan sharciyada Golaha Deegaanka ay u furnaadaan dhageysiga dadweynaha. Marka la joogo dhageysiga dadweynaha ee ku saabsan sharciyada, dadweynuhu waxay ku soo bandhigi karaan faallooyin ka hor tallaabo kasta oo sharciyeed oo kawnsalku qaado.
Dhageysiyada dadweynaha ee go'aannada
Sharcigu uma baahna dhageysiyada dadweynaha ee ku saabsan qaraarada golaha. Laakiin faallooyinka dadweynaha ee go'aannada waxaa lagu aqbalaa go'aanka madaxweynaha golaha.
Sidoo kale waxaad kula wadaagi kartaa faallooyinka qaab qoraalka ah oo waxaad ku soo gubin kartaa qatka internetka
Waxaad waqti kasta hadalkaaga u soo dirii kartaa Metro Council adigoo ku soo gudbinaya qatka internetka. Soo gudbi faallooyinka 4 p.m maalinta ka horreysa kulanka jadwaleeyay ee loo qabtay Golaha Deegaanka ee adigu aad danaynayso ay fikradahaagu qayb uga noqdaan diiwaanka kulankaas. Kulamada inta ay bilaaban kar hor, xubnaha Golaha Metro waxay helaan faallooyin lagu soo gudbiyo waqtiga kama dambaysta ah.
Qatka internetka ku soo gudbi faalooyinka
Sida faallo looga bixiyo kulanka
Dhammaan kulamada dadweynaha waxaa lagu qabtaa qatka internetka illaa ogeysiis dambe mooyee. Si Metro Council aad faallo u siiso inta lagu jiro kulanka lagu qabayo qatka internetka:
Kulanka ka hor:
Arag ajandayaasha kulanka si aad u aragto haddii mawduucyada adiga aad xiisaynayso lagu daboolayo. Faallooyinka ku saabsan mowduucyada aan ku jirin ajandaha waxaa laga codsanayaa qaybta wada-hadalka dadweynaha ee ajendaha bilowga kulan kasta. Hadal ku saabsan qawaaniinta gaarka ah waxay dhacdaa inta lagu guda jiro dhageysiga dadweynaha ee loo qorsheeyay qodobkaas.
(buuxinteeda waa ikhtiyaar) Saxiix hore adoo email ugu diraya Isuduwaha Sharci dejinta ee [email protected] . Isuduwaha ku wargeli haddii aad rabto inaad ka faalooto mowduuc ku saabsan ajandaha kulanka. Dadka isdiiwaangaliya kama dambays duhurkii maalinta kulanka la qabanayo ayaa joogaya safka hore si ay faallooyin ay uga dhiibtaan. Isdiiwaangelin hore looma baahna si aad faallo dadweyne aad uga bixiso.
Hadallada dadweynaha waxaa lagu xaddiday saddex daqiiqo qofkiiba. Way ku caawin kartaa inaad horay ugu tabbabarato si aad u hubiso inaad haysato waqti kugu filan, iyo inaad diyaariso dulmar si aadan ugu akhrin kalmad-kalmad. Haddii tiro shakhsiyaad oo tiro badan ay iska diiwaangeliyaan oo ay ka hadlaan, markaa wakhtiga hadalka waxaa dhici karta in la yareeyo si loo hubiyo in qof kasta uu helo uu ku hadlo.
Kulanka qatka internetka
Maalinta kulanka la qabanayo, booqo bogga Jadwalka Kalandarka Metro Council. Raadi kulanka aad jeceshahay inaad kaqeyb gasho oo guji qatka xiriiriyaha goobta si aad ugu gasho kombuyuutarkaaga. Haddii aad doorbideyso inaad dhinaca telfoonka uga soo biirto, markaa soo wac lambarka ku qor bogga internetka. Naftaada sii daqiiqado dheeraad ah si aad ku gasho haddii ay tan tahay markii ugu horreysay ee aad ka qayb gasho kulan qatka interneka ah.
Sug qaybta wada-hadalka dadweynaha ee ajendaha, ama dhageysiga dadweynaha ee la qabanayo. Magacaaga ayaa la yeerin doonaa marka ay tahay waqtigaaga, haddii aad horay isku sii qortay. Haddii aadan horay isu qorin, dhageyso tilmaamaha "gacantaada kor u qaad" (“raise your hand”) ee qatka aad ku arkayso.
Hadalkaaga ku bilaw adiga oo dhahaya, "Diiwaan ahaan magacaygu waa (For the record my name is” ______."
Golaha kala hadal sida, "Madaxa golaha iyo xubnaha golaha.” “Council president and members of council.”
Haddii aad wadaagayso talo ku saabsan go'aanka golaha ee la qorsheeyay, dheh inaad taageersan tahay ama aad ka soo horjeeddo tallaabada sharci dejinta. Si kooban u sharax sababta. Fekridaada shaqsi ku taageer sida ugu macquulsan.
Sida fikradahaaga si fool-ka-fool ah loogu bixiyo
Qolka wuxuu ku dhex yaalaa Xarunta Metro Regional Center, 600 NE Grand Ave. ee Degmada Lloyd District of Portland.
Fadlan ogsoonaw in dhammaan kulamada dadweynaha ee Metro hadda lagu qabanayo Zoom sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19 darteed. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ah sida aad uga heli la’hayd qatka internetka, fadlan wac Isu-duwaha Sharci-dejinta 503-797-1916 ugu yaraan 2 maalmood ee maalmaha shaqada kulanka ka hor.
Kulanka ka hor
Ajandayaasha kulanka horey uga soo fiirso qatka internetka ama qolka golaha si aad u aragto haddii mawduucaaga xiisaha adiga kuu leh imuu ku jiro ajandaha.
Horey u keen 10 (toban) nuqul oo ah qoraal kasta oo taageeraya, sida khariidado ama qoraal kale, iyo nuqul dheeri ah oo hadalkaaga qoran. Nuquladan sii isku-duwaha sharci-dejinta markii laguugu yeero inaad ka hadasho.
Haddii aad kulanka timaaddo oo mowduucaaga aan lagu soo darin jirin ajandaha, weydii isku-duwaha sharci-dejinta haddii aad ka hadli karto inta lagu jiro qaybta wada-hadalka dadweynaha ee kulanka, ama haddii aad u noqonayso inaad hadasho marka qoraalka jadwal loo sameeyo waqti kale.
Kaarka ku wac magacaaga, cinwaankaaga iyo ajendahaaga (haddii ay khuseyso). Kaarka u dhiib iskuduwaha sharci dejiyaha. Waa inaad adiga joogtaa si aad kaarkaaga u dhiibto. Goluhu wuxuu oggol yahay oo keliya hal kaar qofkiiba, halkii kulanba. Madaxweynaha golaha ayaa go'aaminaya amarka in loogu yeero xubnaha bulshada inay ka hadlaan.
Marka adiga laguu yeero in aad ka hasho, tag qolka hortiisa oo ku fadhiiso miis mikrafoonka ku dhegan. Hadalkaaga ku bilaw adiga oo dhahaya, "Diiwaan ahaan magacaygu waa (For the record my name is ______."
Ku bilaw adiga oo dhaha inaad taageersan tahay ama aad ka soo horjeeddo tallaabada sharci dejinta ee ajandaha. Si kooban u sharax sababta. Fekridaada shaqsi ku taageer sida ugu macquulsan.
Sida faalooyinkaaga loogu diro dhanka boostada
Faalada oo qoran ku soo dir 600 NE Grand Ave. Portland, OR 97232 adiga oo si gaar ah ugu soo gudbinaya the Metro Council.
Ku qor magacaaga iyo macluumaadka lagaala soo xiriirayo.
Soo raaci toban (10) nuqul oo ah qoraal kasta oo taageeraya, sida khariidado ama qoraal kale.
Faaladaada ku soo caddee haddii hadalka aad soo gudbinayso yahay mowduuc la xiriira ajandaha kulanka soo socda ee golaha ama dhageysiga dadweynaha ee la qabanayo. Hadalka waa in la helaa inta aan la gaarin ama ka hor bilowga kulanka si uu uga qayb noqdo diiwaanka kulanka.
Nuqulada hadalkaaga ayaa la siin doonaa golaha haddii la helo kahor inta aan la gaarin kulanka golaha ee loo ballamay.